Fantaro Ireo Miaraka Mitantana ny Ala Mando ao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2017 12:58 GMT
Vakio amin'ny teny Português, English, русский, Ελληνικά, Français, Español
Ekena ny fananantany ho an'ireo vondrom-piarahamonina sy ny tany iarahana mizaka ao Meksika (Sary nalaina tao amin'ny tranonkala ofisialin'ny Alianza Selva Maya ary nahazoana alàlana ny famoahana azy eto)
Ny 21 Aogositra 2007, noravaravain'ilay rovodoza Dean tamin'ny tafiotra nahatratra 300 km isan'ora ilay tanàna Meksikana Bacalar. Araka ny tatitra iray navoakan'ny Sekreteran'ny Atitany ao Meksika sy ny Ivontoerana Nasionaly ho Fisorohana ny Loza, maherin'ny 210 tapitrisa dolara ny tetibidin'ny fahavoazana naterak'ilay tafiotra.
Namely ny ala mandon'ny Mayan ihany koa ilay rivodoza, nanorotoro faritra 917.000 hektara (2.3 tapitrisa ara) tamin'ny faritra antenantenan'ilay ala mando, ary 270.000 hektara (667,000 ara) teny amin'ny faritra iva.
Taloha kelin'ilay tafiotra, vao avy namarana ny faritra voalohany nahazoany fanomezandàlana hanapaka ny vondrom-piarahamonina Noh Bec, ampahany amin'ny fandaharanasa fiarahana mitantana natomboky ny fanjakana tamin'ny 1999.
Taorian'ilay rivodoza, natsahatry ny sekretarià ilay fandaharanasany ary fanomezandàlana mandritry ny fotoana voafetra no omeny. Votsotra tamin'ny Noh Bec ihany koa ny sertifika fitrandrahana ala teo aminy nomen'ny fikambanana “Smart Wood”, izay nanome alàlana ilay vondrom-piarahamonina hanondrana ny hazo voakàpany ho any Etazonia sy Alemaina. Nandritra izany, tavela taminà toerana sarotsarotra ihany ilay ala mando.
Taona telo taty aoriana, mbola mijaly ihany ny Noh Bec. “Nanomboka namidy araka izay azony natao ireo hazo, ary [noho io dia] mitontongana be ny vidiny,” hoy i Abraham González, talen'ny fitantanana ny ala mado. “Ilaina ny mitambatra mba hampitoviana ny vidin'ny hazo.”
Toy izao no nanombohan'ny vondrom-piarahamonina “Alianza Selva Maya” tamin'ny 15 Jolay 2011.
Gazety iray ao an-toerana mampiseho ny fampanarahana fenitra ny Alianza Selva Maya. Sary : bilaogy ofisialin'ny Alianza Selva Maya. Famoahana nahazoana alàlana.
Ny andininy faha- 27 amin'ny Lalàm-panorenana Meksikana, nolaniana tamin'ny 1917, dia manome ny tany ho an'ireo tantsaha mahantra sy ireo vondrom-piarahamonina indizena, tamin'ny alàlan'ny fananganana endrika fototra roa lehibe: tany iarahana mizaka sy tanin'ny vondrom-piarahamonina.
Mizaka ny ‘zo sivily’ fitompoana ny tany ireo mpiara-miombona antoka amin'ny tany iarahana mizaka, saingy tsy afaka mampanofa, mivarotra, manao antoka na manolotra azy ho anto-bola aman'olona. Sorohan'ilay rafitra ny hanomezana zo feno amin'ny fananantany noho izy io mety hitondra mankany amin'ny fanodinkodinana ireo tantsaha mahantra.
Hatramin'ny 1940 dia eo ampela-tànanan'ny governemanta ny ivon'ny fifehezana ireo ala mando, fony natolotra ho an'ireo orinasa tsy miankina ireo tany midadasika mba hahafahana mitrandraka ny otrikarena ao anaty ala. Tany amin'ny faramparan'ireo taona 1970s, latsaka tanaty krizy ny sehatry ny fitrandrahana ala Meksikana taorian'ny fitrandrahana tafahoatra ny alany. Tamin'ny 1986, namarana ny fanolorany tany midadasika ho an'ireo orinasa tsy miankina ny fanjakana, tamin'ny famerenana ireo otrikarena ao anaty ala ho tany iaraha-mizaka sy ho an'ireo vondrom-piarahamonina.
Tamin'ny 1997, naka tetikady iray vaovao ireo Meksikana manampahefana mba hampiroboroboana ny fitantanana ny ala, nifototra taminà fandaharanasa roa vaovao: Ny Fandaharanasa Fampandrosoana ny Ala sy ny Fandaharanasa Fampandrosoana ny Fitantanan'ny Vondrom-piarahamonina ny Ala.
Vinaina ho 2.300 ireo tany iarahana mizaka sy any vondrom-piarahamonina ao Meknisa — 8.400 no fitambarany — navela hampiasa ny hazo avy ao amin'ny alan-dry zareo sy ny ala mando. Nandritry ny 25 taona lasa, maherin'ny 80 isanjaton'ireo ala sy ny ala mando tao amin'ny firenena no notantananan'ireo vondrom-piarahamonina ambanivohitra sy vahoaka indizena, tamin'ny famelàna azy ireo hanapaka hevitra momba ny famokarana hazo ho an'ny tsenam-barotra.
Manana 113.000 hektara (280,000 ara ) amin'ny atiala ny Alianza Selva Maya any amin'ireo faritra fantatra amin'ny hoe Faritra Ala Maharitra, ary 49.000 hektara hafa (121,000 ara) eo ambany fiarovan'ny vondrom-piarahamonina. Ireo taniny dimy iarahana mizaka dia Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Noh Bec, Petcacab y Polinkin, ary Xhaxil y Anexos.
José Antonio Arreola, mpanolotsaina teknika momba ny ala, no manazava hoe “ny tany tsirairay iarahana mizaka dia manana fitantanana mizaka tena, saingy ao anatin'ny Alianza izy ireny,” satria “ao anatinà tany tokana iray iarahana mizaka, tsy afaka mahazo vidiny tsara ho an'ny hazonay izahay.”
Alfonso Argüelles, solontenam-pirenena ao Meksika ao amin'ny Forest Stewardship Council, fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana mpanome alàlana ary manana ny biraony ao Alemaina, no nanazava tamin'i Elaine Díaz ireo fanamby goavana atrehan'ireo vondrom-piarahamonina:
Misy tany roa iarahana mizaka, izay vehivavy ny mpitantambola ao. Miasa any amin'ireo faritra fanaovana zahavoary ny maro. Raha ny momba ireo tanora, tsy tianay handeha ho any an-tanàndehibe hitady aterineto ry zareo, araka izany, nentinay ho ao an-toerana ny aterineto. Tsy tianay handeha ry zareo noho ny resaka TV, dia nentinay ho ao an-toerana ny TV mandeha an-tariby. Ny vondrom-piarahamonina no manome azy.
Isambolana dia mety hahazo hatramin'ny 4.000 pesos Meksikana ny tompontany iray ho toy ny vatan-karamany. Raha toa ka teknisiana momba ny ala ry zareo, mety hahatratra hatramin'ny 14.000 pesos io. Manana politika iray izahay momba ny fanomezana asa manome tombony ny tompontany, avy eo ny taranak'izy ireo sy ny havany, avy eo ireo mpikambana ao anatin'ny vondrom-piarahamonina, ary farany, ny vahiny na olona avy any ivelan'ny vohitra.
Noresahan'i Argüelles ihany koa ny momba ny fomba fiatrehan'ny filankevitra ireo mpiaraka miombona antoka amin'ireo tany iarahana mizaka izay tsy tia mandray an-tànana ireo loharanon-karena iraisana:
Ny fanokafana toerana ho an'ireo mpandraharaha. Ao ireo izay afa-po amin'ny fijinjàna ny hazon'izy ireo sy ny fivarotana azy ireny, misy ireo maniry ny hampitombo vidy azy amin'ny fikarakarana azy aloha. Ireto farany, ohatra, dia nomena alàlana hanorina ozinina fanodinana sy fivarotana hazo. Raha manana alàlana hanana toerana fanodinana sy fivarotana hazo ianao, tsy tianao hotazonina ve ny hazoko, sa tsy izany?
Hatramin'ny namoronana azy, efa nampidirin'ny Alianza ho ao anatiny ireo tetikasa zahavoary sy ny fitehirizana ny entona karbôna, ary namolavola teknika izy ho fampifanarahana ny fambolena amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, hoy i Argüelles manazava:
Izahay no milina voalohany manodina ny fitahirizana ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra. Izany no fiainanay.
Ny dika voalohany sy lavabe amin'ity lahatsoratra ity dia azonao jerena ato, miaraka amin'ireo lahatsoratra hafa nosoratan'i Elaine Díaz, izay nahazo vatsimpianarana iray avy amin'ny Tambajotra Erantanin'ireo Mpanao Gazety ho fandrakofana ny COP13.